အောင်ခိုင်မိုး: February 2012
Software များ Download ယူရန်။
Author : အောင်ခိုင်မိုး
ကျွန်တော် အပေါ်က ပုံမှာ ပြထားသလိုပါပဲ။ G-Talk ကို မီးအ၀ါလေး လုပ်ချင်နေသူတွေအတွက် ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး Download ချသွားလိုက်ပါ။ ကဲ..စလိုက်ကြရအောင်.... အရင်ဆုံး Download ချသွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကျွန်တော် အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Download ချထားတဲ့ ဖိုင်ပေါ် Right Click ထောက် Extra Here လုပ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဒါတွေကို လုပ်နေစဉ်အတွင်း မိမိ Gtalk ကိုပိတ်ထားပါ။ မိမိရဲ့ စက်မှာလည်း Winrar ရှိရပါမယ်။
ခေါင်းစဉ် : G-Talk, နည်းပညာ |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
ကျွန်တော်ဒါလေးက နောက်ဆုံးထွက် မဟုတ်ပေမဲ့ သုံးလို့ ကောာင်းတဲ့ Version လေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 11 ကျော်နေပါပြီ။ ထွက်နေတာက။ ဒါပေမဲ့ 97 က Connect လုပ်ရာမှာ မြန်ဆန်လို့ ဒီကောင်လေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း သိပြီးကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ သူက ကျော်ပေးတဲ့ Software လေးပါ။ ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုက်တွေကို ကျော်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ အောက်မှာ Download သွားပါ။
ခေါင်းစဉ် : Softwares, Tools |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
ညဏ်စမ်းမေးခွန်းလေးကိုဖြေပေးနော်...( ဟာသ )
ဟဲဟဲ....ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော် အားလုံးကို ပျော်စေချင်ပါတယ်။ အစ်မဇာရည် ဆီက ပြန်လည် မျှဝေပေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့သူက ချက်ချင်းသိနိုင်သလို မသိတဲ့ သူက သိသွား၇င် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် မေးပြီနော်......
“ လူတစ်ယောက်မှာ ဆိုင်ကို ၀င်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ပြန်လည်း ထွက်လာရော... ခွေးဖြစ်သွားတယ်။။။ အဲဒါ ဘာဆိုင်လဲ ... ”
သိတဲ့သူ Comment ပေးတဲ့ နေ၇ာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် C-Box မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေပေးသွားပါ။ မသိတဲ့သူက helperaunglay@gmail.com ကို Invite လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ် : ဟာသများ |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
ActionVoip 4.08 Build 645
ကျွန်တော်ရှေ့မှာ ဒါလေးကို တင်ပေးဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်က အဆင်မပြေလို့ ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ.... Action Voip က ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာ ပိုက်ဆံ သက်သာပါတယ်။ လိုအပ်သူများ အောက်မှာ Download ချသွားပါ။ အပြည့်အစုံ သိချင်ရင်တော့ သူ့ရဲ့ Home Page လေးမှာ သွားပြီး လေ့လာလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ခု တင်ပေးမှာက Windows အတွက်ပါ။ သုံးနိုင်တဲ့ Windows တွေကတော့ Windows-7,XP,Vista တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 5.04 MB ပဲရှိပါတယ်။
ခေါင်းစဉ် : Chat, Tools |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
Winrar v4.11 Final ( 32 + 64 BIT )
ကျွန်တော် Winrar လေး Update ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Winrar ဆို လူတိုင်း သိလောက်ပါတယ်။ စက်တိုင်းမှာလည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Software လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံး မပြုတတ်တဲ့ သူများအတွက် ကျွန်တော် Winrar အသုံးပြုနည်း လေးကို ဒီနေရာလေး မှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာ 32 နဲ့ 64 နှစ်မျိုး ခွဲပြီး တင်ပေးထား ပါတယ်။ ယူသွားလိုက်ပါ။
ခေါင်းစဉ် : Winrar |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ အားလုံး ပျော်ရွင်သွားအောင် ဟာသလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Gmail အကောင့်ဖွင့်ရအောင်...(ပြန်လည်ရှင်းပြချက်)
ကျွန်တော့်ကို အစ်ကိုတစ်ယောက်က အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီး Mail ပို့ထားပါတယ်။ ခု ကျွန်တော် ပုံလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ရှင်းပြထားပါတယ်။ ခုတစ်လော ကျွန်တော် နည်းနည်းအားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပို့စ်တွေ နည်းနည်းပါးပါး ရေးဖြစ်တာပါ။ အရင်ဆုံး ဒီနေရာလေး ကို သွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်က ပုံလေး အတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။
ခေါင်းစဉ် : G-Mail |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
Android Phone မှာ Wallpaper တွေကို Original အတိုင်းထားရအောင်.....
ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းအကြောင်း မေးထားတဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခုမှ လေ့လာဆဲပဲ ရှိသေးပါတယ်။ ကိုယ်သိတာလေးတွေကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးသွားပါမယ်။ ခုတစ်လောလည်း အလုပ်လည်း များတာက တစ်ကြောင်း။ စာဖတ်သူတွေအတွက် အသစ်မရှိရင်လည်း အော်ကြမှာ က တစ်ကြောင်း :D နဲ့ ကြိုးစားပြီး ဖုန်းအကြောင်းလေး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ခုတစ်လော ခတ်စားလာတဲ့ Android အကြောင်းလေးပါ။ Android Phone တွေမှာ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Wallpaper လေးတွေကို မူလပုံစံအတိုင်း ထားတာပါ။ ဖြတ်လို့လည်း ရပါတယ်။ အောက်မှာ Download သွားပါ။
ခေါင်းစဉ် : Android |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
Wifi Hack Tool + Wireless Key View
ကျွန်တော့်ကို အစ်ကိုတစ်ယောက် တောင်းထားတာလေး ရှိလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့သူကတော့ ယူထားလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့.. ကိုယ်ကိုတိုင် ကိုယ်ချင်းစာပြီးတော့ လုပ်ပါ။ နာမည်ကို ကြည့်တာနဲ့တင် သိနိုင်ပါတယ်။ မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ အောက်မှာ နှစ်မျိုးလုံး Download သွားပါ။ ကိုလုလုင်မောင်ရဲ့ လင်ခ့်ကို ပြန်ယူသုံးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Upload ဖို့ အချိန်မရှိလို့ပါ။
ခေါင်းစဉ် : Hack, Software, Tools |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
ကျွန်တော် ခုလောလောဆယ်. အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်နေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဘက်ကို တောင် မလှည့်နိုင် သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တောင်းထားတာတွေ များလာလို့ ကျွန်တော် အားတဲ့အခါတိုင်း အချိန် မှီအောင် တင်ပေးပါ့မယ်။ စိတ်လည်း မဆုိးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပရစေ..... ခု ကျွန်တော် တင်ပေးတဲ့ Action Voip လေးကတော့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပေးတဲ့ ကောင်လေးပါ။ ပိုက်ဆံလည်း သိပ်မကုန်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော် မသိပါ။ တောင်းထားတဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်လည်း ရှိတဲ့နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ် : Phone, Software |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
DAEMON Tools PRO Advanced v5.0
ခုတစ်လော ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ဂ်ဘက်ကို မလှည့်ဖြစ်သေးပါဘူး။ မေးထားတာတွေကို ကျွန်တော် နောက်ပိုင်း ပြန်ဖြေပေးသွားမှာပါ။ ခု ကျွန်တော် Daemon Tools PRO Advanced လေး Update ထွက်လာ လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ .iso ဖိုင်တွေနဲ့ အခြား ဖိုင် Format တွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ .iso ဖိုင်တွေကို ခွေနဲ့ ကူးဖို့မလိုပဲ ဒီကောင်လေး သုံးပြီးဖွင့်လိုက်ယုံနဲ့ အသုံး ပြုလို့ရပါတယ်။ လိုချင်သူများ အောက်မှာ Download ချသွားလိုက်ပါ. စမ်းချင်သူများ အောက်မှာ Download ချသွားလိုက်ပါ။
ခေါင်းစဉ် : Tools |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
Social Network လေးပါ။
ကျွန်တော် ဟိုးတစ်ချိန်ထဲက ရေးဖို့ အားခဲထားတာ အခုမှပဲ လုပ်ဖြစ်တယ်။ အလုပ်တွေကလည်း ရှုပ်နေတာနဲ့ ဒီဘလော့ဂ်ဘက်တောင် မလှည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ Question And Answer ဘလော့ဂ်လည်း ဘာမှ မလုပ်ရ သေးပါဘူုး။ မေးချင်ရင် itmanaungkhinemoe@gmail.com ကိုပဲ မေး ပို့ပေးပါ. အခု ကျွန်တော် Social Network ( Forum ) လေး ထောင်ထားပါတယ်။ လာပြီးတေ့ာ မန်ဘာလေးတွေ ၀င်ပြီး ပို့စ်လေးတွေ ၀င်ရေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ သွားချင်ရင် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီးတော့ သွားပါ။
ခေါင်းစဉ် : အသိပေးခြင်း |0ဦးမှတ်ချက်ပြုသွားပါသည်။
အသစ်တင်တိုင်း Mail သို့ပို့ပေးပါမည်။ G-Mail လိပ်စာထားခဲ့ပေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Gmail အကောင့်ဖွင့်ရအောင်...(ပြန်လ...
Android Phone မှာ Wallpaper တွေကို Original အတိုင်...
လိုအပ်သောအကူအညီများ Softwares များ. တောင်းယူချင်ပါက C-BOX မှာဖြစ်စေ၊itmanaungkhinemoe@gmail.comကို Mail ပို့ပြီးဖြစ်စေ & တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်...အောင်ခိုင်မိုး